Inyaniso malunga neNew York Times kunye neeLwimi ze-WSJ Bestseller - Ezintsha
Eyona Ezintsha Inyaniso malunga neNew York Times kunye neWall Street Journal Bestseller Lists
Inyaniso malunga neNew York Times kunye neWall Street Journal Bestseller Lists
Ngokwemigangatho emininzi, ndisemtsha kumzi-mveliso wokupapasha.
Sekuyiminyaka esibhozo nje ndisebenza kwiphulo lam lokuqala lokusungula incwadi, kodwa ukusukela ngeloxesha ndisebenze namakhulu ababhali malunga nawo onke amandla okuthengisa onokuwacinga. Ndidlale indima yokubhengeza, umququzeleli woluntu, umphuhlisi wewebhu, ingcali yemidiya yoluntu, njalo njalo.
Kwiindima zam ezahlukeneyo, ndiye ndangqubana Inkqubo ye- INew York Times kwaye Ijenali yeWall Street Uluhlu oluthengisa kakhulu amaxesha amaninzi.
Ndincedile ukumilisela iiNombolo 1 INew York Times abathengisi abathengisayo, kunye nabathengisi abaphezulu abahlanu abaphezulu. Ngaxa lithile, abahlanu kubathengi bam babeneencwadi kwi NGOKU uluhlu ngaxeshanye. Ngelixa ndingakhange ndilande Inkqubo ye- Ijenali yeWall Street Uluhlu ngokusondeleyo, bendinezinto ezimbalwa kuluhlu olunje.
Ndikwanazo nezandla zokuphehlelela ezimbalwa ngoku, abanye ngoku bayagqibezela, kwaye abanye baqala ukulungiselelwa kamva kulo nyaka-nangakumbi nangakumbi, ndiyayoyika intlekele epheleleyo lolona luhlu luthengisa kakhulu.
Njengoko ndilungiselele ukubhala eli nqaku, ndinengxaki yokulungiselela zonke iingcinga zam, idatha, amabali, kunye nemithombo kwingxelo enye yokudibana, ke endaweni yoko, ndigqibe kwelokuba ndidwelise inqaku-nge-nqaku, kungekho Uku-odola, izinto endizibonileyo okanye endinamava ngazo ngomnye wabathengi bam okanye abantu endisebenza nabo kushishino lokupapasha.
Injongo yam kukukhanyisa ukukhanya kwinto eyenzekayo kanye nolu luhlu luthengisa kakhulu- Inkqubo ye- Ijenali yeWall Street kwaye INew York Times -Kwaye unikeze ngolwazi kubabhali abanethemba lokubabetha ngenye imini.
Uludwe lwe-BESTSELLER: KUTHENI KUBALULEKILE?
Kuyinyani, uluhlu oluthengisa kakhulu luphelelwa lixesha. Zininzi iincwadi ezithi, ngaphandle kokufumana iphepha WSJ okanye NGOKU , qhubeka uthengise amawaka eekopi, kwaye ube nefani enkulu.Nangona kunjalo, inyani ishiyekile kukuba une INew York Times okanye Ijenali yeWall Street ethengisa kakhulu inokuwuphucula kakhulu umsebenzi wakho.
Kuba ishishini lokupapasha lisabonisa ukuzithoba kolu luhlu, ukufumana igama lakho kuzo kunefuthe elibi kwinkontileka yakho elandelayo yencwadi.
Ukuba ungumbhali ongaqaliyo, ngakumbi ukuba ubhala iincwadi zeshishini, uluhlu oluthengisa kakhulu luthetha iigigs zokuthetha, amaxabiso aphezulu okubonisana, ukubonakala okuphezulu, kunye nodumo oluphuculweyo.Bathetha ukuthengisa ngakumbi. Ukuba incwadi yakho ithengisa kakhulu, ngequbuliso ifumana iikopi ezingaphezulu kwiishelufa zevenkile kunye nolunye unyuselo. Yinkqubo yokuzondla ngokwakho.
Uluhlu oluthengisa kakhulu luthetha ukubonakala ngakumbi kwimithombo yeendaba. NGOKU abathengisi bafumana iifowuni kunye ne-imeyile kumajelo eendaba.Kwaye masijongane nayo: Ibalulekile kuba intle kakhulu ukuba yinto INew York Times kwaye Ijenali yeWall Street othengisa kakhulu.Kodwa eyona nto iphambili, ngakumbi ukuba unento yokwenza nomzi mveliso wokupapasha ngokwesiko, yile: WSJ okanye NGOKU ethengisayo = imali engaphezulu yababhali, abapapashi kunye neearhente.
YINTONI NGOKUQHELEKILEYO INCWADI YOKUTHENGA IBHASARI?
Ukuba ubuza umntu oqhelekileyo lo mbuzo-umntu ongazange wehlele kwindawo engasemva kwezona zigcawu zintengiso-bayakuphendula into enje, Yincwadi ethengise amashumi amawaka eekopi , okanye, Yincwadi ethengise ezona kopi.
Nantsi intro emfutshane ukuba njani ngokwenene iyasebenza. Amanqaku angaphezulu aya kungena nzulu kwezinye izinto zoku.
THE INDAWO YENDLELA YENDLELA ULUHLU LWEBESTSELLER
WSJ yakha uluhlu lwayo ngokusekwe kumanani entengiso ayifumana kwiNcwadi kaScan kaNelson. Ngokubanzi, ukuba uthengisa ezona ncwadi zininzi kudidi njengoko kuchaziwe yi-BookScan, uya kubetha uNombolo 1 kolo hlobo Inkqubo ye- Ijenali yeWall Street Uluhlu oluthengisa kakhulu.Iyavakala, akunjalo?Ngaphandle kokuba i-BookScan ayilandeleli konke ukuthengwa.It ayibandakanyi ukuthengisa zenziwe ngeevenkile ezinkulu zebhokisi enkulu, ezinjengeWalmart kunye neKlabhu yaseSam, engachaphazeli uninzi lwethu. Nangona kunjalo, ayibandakanyi ukuthengisa okuvela kwi-CreateSpace kunye namanye amaqonga okuzipapasha, achaphazela amawaka ababhali.
Kodwa xa iyonke, BookScan ngowona mthombo wedatha uchanekileyo, kwaye inika ingxelo malunga neepesenti ezingama-75 ukuya kwiipesenti ezingama-85 zentengiso yeencwadi, kuxhomekeke kubani ocelayo.
Okungakumbi Inkqubo ye- Ijenali yeWall Street kamva.
THE AMAXESHA ENTSHA YORK ULUHLU LWEBESTSELLER
Iqhina lisongelwe kwimfihlelo ngaphakathi kwi-enigma, njengoko isitsho njalo.
NGOKU igcina isiciko esiqinileyo kwinkqubo yayo yokukhetha abathengisi. Kuyaziwa ukuba NGOKU iisampulu uluhlu lwazo lwabathengisi beencwadi kwilizwe liphela-nangona ezo zisikiweyo ziyimfihlo egcinwe ngokuqinileyo- emva koko jonga idatha ngobulumko NGOKU ubuchopho, kwaye uthathe isigqibo sokuba bacinga ukuba ngubani oza kuba kuluhlu.
Kuyatshiwo ukuba oku kwenzelwa ukugcina abantu ukuba bangadlali kwinkqubo, eyinyani ngokuyinyani.Kodwa yenziwa kwakhona ukuze Inkqubo ye- INew York Times Unokuthetha malunga nokuba zeziphi iincwadi ezenza ukuba ukuthembeka okungaphezulu kuthiwe njengeyona nto ithengiswayo.
Ngokuqinisekileyo ayindim ndedwa obona iingxaki ezinokubakho ngale nkqubo.
Khumbula: NGOKU kwaye WSJ uluhlu = imali engaphezulu.
Ke iqela elincinci labantu lijonga idatha ekhethiweyo yokuthatha isigqibo sokuba ngubani ababona bebalulekile ngokwaneleyo ukuba babizwe ngokuba INew York Times umthengisi ogqibelele.Okwangoku, size kude kakhulu neencwadi ezithengisa ezona kopi.Sibeke isiseko, ke ngoku ndingabelana nge ngokwenene Izinto ezingaqhelekanga.
NGUBANI OWENZAYO NGOKU UTHANDO?
Umhlobo wam unokufikelela kwiinombolo zeeveki ngeeveki zikaNielson BookScan -loo mbutho ulandelela iipesenti ezingama-75 ukuya kwiipesenti ezingama-85 zentengiso yeencwadi.Kunyaka ophelileyo, uthathe isigqibo sokubuyela emva athelekise amanani eBookerScan kwi NGOKU Uluhlu oluthengisa kakhulu ukubona ukuba akukho nto ayifunayo anokuyifumana.
Ukusukela NGOKU yenza ingxelo yayo eyimfihlo kunye nokukhetha, wayefuna ukubona ukuba angafumana naziphi na iimpawu zokukhetha icala.
Nazi izigqibo ezimbini awaziqokelelayo kuphando lwakhe lobuqu, ngokuthelekisa amanani okuthengisa e-BookScan okwenyani neencwadi ezithathwa NGOKU Abasebenzi abaza kuthengisa kakhulu:
Ukuba kunokwenzeka usebenzele Inkqubo ye- INew York Times kwaye ube nencwadi ngaphandle , incwadi yakho kunokwenzeka ukuba ihlale kuluhlu ixesha elide kwaye ibe nenqanaba eliphezulu kuneencwadi ezingabhalwanga INew York Times abasebenzi.
Ukuba kunokwenzeka ukuba ubhale incwadi egcina inkcubeko ekhuselekileyo , kunokwenzeka ukuba ubekwe kumgangatho ophantsi kwaye ushiye uluhlu ngokukhawuleza kunezo ncwadi zinobunkunkqele kwezopolitiko.
Kutheni uluhlu olwahlukileyo lweekopi zedijithali kunye neziprintwayo?
Ukusuka kumbono wombhali, oku kuyaphambana. Ndiye ndabandakanyeka ekuqalisweni kweencwadi ezithengise ngaphezu kweekopi ezaneleyo zokubetha uluhlu lwezona zinto zithengisa kakhulu, kodwa ngenxa yokuba iinombolo zahlula phakathi kwidijithali kunye nokuprinta, abazange bakwenze.Njani iarcane, kwaye indala.Leliphi ilizwe elinengqiqo ukuba kubalulekile ukuba ndiyithenge incwadi kwiphepha okanye kwifomathi yedijithali?Ndisayithenga incwadi. Ndisacinga ukuba ibifanele imali. Kodwa ngasizathu sithile, i NGOKU kwaye WSJ uluhlu lucinga ukubalwa kwamaphepha njengokuthengisa ngaphezulu kwidijithali.
IArcane kunye nezinto ezindala kuphela kwamagama amnandi anokusetyenziswa apha. Abafundi abakhathazeki malunga nemodareyitha, kungoko kutheni uluhlu oluthengisa kakhulu?
INDLELA YOKUGQIBELA INCWADI YAKHO UTHENGE
Makhe nditshintshe amagiya apha kwaye ndinike ubuncinci uluhlu lwezizathu zokwenza imithetho emininzi engaqhelekanga.Uluhlu oluthengiswa kakhulu lunyanzelekile ukuba lutsibe kwihupu ezininzi, kuba abantu bahlala bezama ukudlala inkqubo.Ukuba ndingumntu osisityebi kwaye ndipapasha incwadi, yintoni enokundithintela ekuthengeni iikopi ezingama-20 000 zencwadi yam kwaye ndizibeke kuluhlu?
Ndicinga ukuba sonke singavuma ukuba ngelixa sifuna uluhlu lweyona nto ithengiswayo lubonise ezona ncwadi zithengiswayo, asifuni ukuba abantu bakwazi thenga indlela yabo kuluhlu nokuba, akunjalo?Ke uluhlu oluthengisa kakhulu luzama ukubeka iitsheki kunye neebhalansi endaweni yokuqinisekisa ukuba abantu abanako ukwenza oku.
Kwenzeka ntoni ke? Bahlamba iimpahla baqala ukuvela. Isebenza njani imali ngokuhlamba iimpahla?
Inyathelo 1.Fumana indawo ethengisa iimpahla. Kukho iqaqobana labo phaya. IsiphumoSource sesona saziwa kakhulu.
Inyathelo 2. Babhalele itsheki ukuhlawula umrhumo wabo. Abasebenzi simahla, emva kwayo yonke loo nto.
Inyathelo 3. Babhalele enye itsheki-yeencwadi zakho. Olu tshekisho kukuthenga iikopi zencwadi yakho. Kuxhomekeke kwiphulo, kodwa liya kuhlala libalelwa kumawaka. Sizama ukubetha uluhlu oluthengisa kakhulu apha, emva kwayo yonke loo nto.
Inyathelo 4. Ifemi ihlamba intengiso. Iqesha abantu kwilizwe liphela ukuba bathenge iincwadi kubathengisi abohlukeneyo ngexesha, besebenzisa amakhadi etyala ahlukeneyo, iidilesi zokuhambisa kunye needilesi zokuhlawula.Oku kuvumela ukuthengisa ukuba kudlule kwaye kubonise njengokuthengisa komntu ngamnye, endaweni yokuthengwa kwesambuku. Ezi ntengiso ziye zixelwe kuNielson BookScan.
Inyathelo 5. Yenza i-champagne corks. Ngoku uthengisa kakhulu.
Ukuba ucinga ukuba ndiyayenza le nto, ndinemithombo emibini ebuyisayo:
Ijenali yeWall Street
Ilizwi lomntu ongaphakathi -Umhlobo owayesebenzela enye yezi femu, kwaye waqalisa kwicala leencwadi ngokushishina ngotywala. Umntu wayeka xa begula kukungabikho kokuziphatha kunye nokuziphatha kuwo wonke umsebenzi; Baye bachaza yonke le nkqubo kum.
KUTHINI NGOKUTHENGWA KWEENKQUBO?
Ngoku singena kwindawo engwevu ngokwenene.Ukuza kuthi ga ngoku, ndicinga ukuba sonke singavumelana ngezinto ezimbini:
Intengiso yomntu ngamnye kufanele bala. Ukuba ndingena kwivenkile ethengisa iincwadi okanye ndingena ku-Amazon.com kwaye ndithenge ikopi yencwadi ethi intengiso kufuneka ixhomekeke kuluhlu lwezona zithengisa kakhulu.
Ukuthengwa okukhulu kwesambuku kumbhali akufuneki bala. Ukuba uthatha isigqibo sokuodola ikopi yencwadi yakho eyi-10,000, ayizukubeka ngokuzenzekelayo kwi NGOKU Uluhlu oluthengisa kakhulu.
Kodwa kuthekani phakathi?
Kuthekani ukuba iklabhu yencwadi ekwi-Intanethi ifuna ukuthenga iikopi zencwadi yakho ezingama-50-enye kuye wonke umntu okwelo qela? Ngaba ezo zinto kufuneka zibalwe njengeikopi ezizodwa ezingama-50, okanye zithengwe njengexabiso elinye?
Ungathini ukuba omnye wabathengi bakho ekuzisa ukuba uthethe kwisebe labo elinabantu abangama-108, kwaye ufuna ukuthenga ikopi kuye wonke umntu okhoyo? Ngaba kufanele ukuba kubalwe iikopi ezili-108 ezizodwa, okanye kuthengwe into eninzi enye?
Ungathini ukuba umbutho ufuna ukuthenga ikopi yencwadi yakho nganye yezahluko zayo, ezingaphaya kwezixeko ezilikhulu eUnited States? Ngaba ezo zinto kufuneka zibalwe njengekhulu elinambini lokuthengisa, okanye njengokuthenga ngobuninzi?
Ungathini xa umntu efuna ukuthenga ikopi yencwadi yakho eyi-10 ukuze ayinike izipho zeKrisimesi?
Ungathini xa inkampani ifuna ukuthenga ikopi yencwadi yakho eyi-1 000 ukuze ibanike bonke abathengi bayo kule minyaka mibini izayo?
Ngaba ezo zibalwa njengeikopi ezizodwa, okanye kuthengwa ngobuninzi esinye ngesambuku?
Apha kulapho iqala khona ukuba nefuzzy, kuba kwimeko nganye kwezi, abantu ngabanye bafumana ikopi yencwadi. Ngokuqinisekileyo, basenokungayifundi, kodwa zingaphi iincwadi ezibeka iishelufa zakho zeencwadi ongakhange uzifunde?
Abantu abohlukeneyo baya kuba neembono ezahlukileyo kwimeko nganye kwezi.
Ukuba ndisebenze nzima ukwakha i-fanbase okanye isiseko sabathengi esiza kuthenga iikopi ezininzi zencwadi yam, bekungafanelekanga ukuba ndifumane ikhredithi ngazo?Kodwa ukuba mna, njengombhali, ndihamba ndize ndithenge ikopi yencwadi yam kwiziphindaphindo ezingama-50 kunye nezili-100 emva koko ndizigcine kwigaraji yam, ezo mhlawumbi azifanelanga ukubalwa.
Kulapho uluhlu oluthengisa kakhulu lungena engxakini. Kunzima kakhulu ukubamba olu hlobo lwento. Ungathini?
INDLELA YOKUTHENGA NGENDLELA YAKHO UKUYA KULUHLU LWABATHENGISI
Sele sithethile malunga nesikimu sogunyaziso lwencwadi, kodwa nantsi enye indlela yokukhupha uluhlu oluthengisa kakhulu ngamandla amakhulu emali.
Ndiziswe ukuba ndidlale indima encinci kwincwadi yokwazisa kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ukuqala ukuya kumhla wokumiliselwa, bendikwiintlanganiso ezimbalwa zeenkomfa ezichaze iqhinga lombhali lokubetha NGOKU kwaye WSJ Uluhlu oluthengisa kakhulu lwencwadi.
Nazi izinto ezimbalwa ezenziwe ngumbhali ukuze zenzeke:
Kuqeshwe ababhengezi beencwadi ezimbini eziphezulu ukumenza abhukishwe kudliwanondlebe kunye nomabonakude kangangoko kunokwenzeka.
Kuthengwe iphepha elipheleleyo kumaphepha esizwe nawengingqi kwilizwe liphela.
Ukuthengisa ngentengiso kwiXesha leSikwere kwisiXeko saseNew York.
Intlawulo ehlawulwayo ukuze umpapashi wencwadi abeke incwadi kwiitafile zangaphambili eBarnes naseNoble.
Into endiyithandayo: Waqesha abantu kwilizwe liphela ukuba baye kwiBarnes yaseNgingqi naseNoble kwaye bathenge ikopi nganye yencwadi ngexesha nemali.
Ngaba iyasebenza? Ewe. Incwadi yavela kwi NGOKU kwaye WSJ Uluhlu oluthengisa kakhulu.Ewe, kwiveki elandelayo incwadi yehlile kuludwe, kwaye ayizange iphinde ibonwe. Amashumi alithoba anesihlanu eepesenti wentengiso yenzekile kwiveki yokuqala.Kodwa umbhali, ngalo lonke ixesha, unokubhekiswa kuye njengombhali weNew York Times othengisa kakhulu.
WSJ okanye NGOKU ethengiswa kakhulu = imali engaphezulu.
KULUNGILE, ABASEBENZI ABASEBENZA NGOKUSEBENZA KAKHULU ABAKHALA
Njengoko ndiyichwetheza le nto, kukho utshintsho olukhulu olwenzekayo ngaphakathi kuluhlu oluthengisa kakhulu.
Ndiye kwiminxeba nabantu abasuka kubapapashi ababini abakhulu, kwaye kubonakala ngathi abanakundinika impendulo ethe ngqo malunga nendlela ekuxelwa ngayo iincwadi kunye nezinto ezenza uluhlu.Abanakundixelela kuba abazi.
Abazi kuba uluhlu luhlala lutshintsha imigaqo ngaphandle kokuxelela mntu.Kuyabonakala ukuba, WSJ Uluhlu lwayo luqinisile imigaqo yalo kukuthengwa kwezinto ezininzi. Incwadi yakutshanje ekuthiwa ithengise iikopi ezaneleyo zoluhlu, kodwa emva koko yalahlwa, kuba yayithengise iikopi ezininzi.
Oku, ewe, akunangqondo, kodwa njengombhali unenceba kubo.
Omnye wabathengi bam usebenze nzima kakhulu ukuseka ubudlelwane obukhulu nabaxhasi babo, ngoku abanomdla wokuthenga incwadi entsha yombhali ngobuninzi, but ngemithetho emitsha asiqinisekanga ngento emasiyenze. Ngaba kufuneka siqhubele phambili kwaye sibayeke ba-odole ngobuninzi, kwaye sinokubangela ukuba incwadi ibe luhlu lwabamnyama?
Lo mbhali uwenzile umsebenzi ngaphambi kwexesha ukwenza ukuba le ncwadi ibe yimpumelelo, ngenjongo yokubetha olunye lwezona zintlu ziphambili, kwaye ngoku kunokuba lilize.
Xa imithetho inobuzaza, ifihliweyo, kwaye itshintsha rhoqo, unokwenza ntoni?
Kwixesha elidlulileyo, umntu endisebenza naye wayefuna ukuqhuba iphulo lokuya kumbhali wencwadi yakhe entsha.
Wajonga umpapashi wakhe ukubona ukuba bangazithatha na iiodolo kwiwebhusayithi yakhe, ukuze akwazi ukunika iibhonasi ezikhethekileyo kubathengi bangaphambili, kwaye azenze zibalwe njengeentengiso ngenye yeekhonkco ezinkulu zencwadi.
Umshicileli wajonga kwaye wathi banako. Wabuza ukuba baqinisekile na. Bathi ewe.
Umbhali waqhuba iphulo lakhe, wathengisa amawaka eencwadi, emva koko wahambisa onke amagama kunye nemiyalelo kumpapashi wakhe. Bathumele uluhlu ku mthengisi.
Umthengisi wagqiba ekubeni abafuni ukuyenza. Kuba abapapashi benze abathengisi abathengi babo endaweni yabafundi, bebengafuni ukutyhala nzima kakhulu ukuze umthengisi amkele isivumelwano. Baye ke banikezela, baxelela umbhali uxolo, kodwa akukho nto banokuyenza.
Utyalomali olukhulu lwexesha, imali, kunye nomzamo ukuze ube NGOKU kwaye WSJ othengisa kakhulu. Ixesha, imali, kunye nomzamo eyayihlawulelwe kwintengiso eyaneleyo , eyaphoswa ngaphandle kwaye ayizange ibone kukhanya kwemini.
INCWADI YAKHO AYIKHO KAKHULU ILUNGE NGOKWANELE
UHugh Howey Uthuli ithengise ngaphezulu kwe-50,000 ikopi kwiveki yayo yokuqala, kodwa yaqala kuphela kwiNombolo 7 ngomhla NGOKU uluhlu oluthengisa kakhulu-nangona lwalukude, iincwadi ezithengiswa kakhulu ezaziphezulu kuludwe.
Umbuzo omangalisayo. Kuyabonakala ukuba, abantu abenza izigqibo malunga nokuba zeziphi iincwadi ezithengisa ezona kopi (qaphela ukuphikisana apho?) Khange bacinge Uthuli yayanele ngokwaneleyo.
Le yingxaki yokuba nezi zigqibo zenziwe liqela elifihlakeleyo labantu abakhethe kakhulu idatha yabo. Amanani okwenyani awabalulekanga kubo.
INCWADI YAKHO AYITHENWANGA NGE KUHLE IZITOLO ZENCWADI
Nali elinye inqaku lokuba ujonge. Imfutshane kodwa ukuya kwinqanaba.
Inkqubo ye- INew York Times iisampulu zeevenkile ezahlukeneyo kwilizwe liphela kwaye inobunzima bokuthengisa iincwadi ngokusekwe apho zithengwa khona .
Kuthetha ukuba ikopi enoqweqwe oluqinileyo lwencwadi yakho ethengwe kwiAmazon.com ibalwa ngokwahlukileyo kunencwadi efanayo ekhawulezileyo ethengwe kwivenkile yeencwadi ze-indie X.
Okwangoku, ngaba ndinyanzelekile ukuba ndiyitsho indlela ekuhlekisa ngayo oku, kwaye ibohlwaya njani ababhali kunye nabafundi ngokufanayo?
Njengababhali, yintoni enokwenziwa ngale nto?
Ewe, WSJ kwaye NGOKU uluhlu = Imali engaphezulu.
Kwaye kunzima ukungahoyi loo nto, kodwa kufuneka. Impendulo ekuphela kwayo kolu hlazo kukuyeka ukukhathazeka malunga nokubetha uluhlu olukhulu lweyona nto ithengiswayo.
Okwangoku, iziphumo zikude ngaphandle kolawulo lombhali ngokuthe ngqo, ukuba ayenzi ngqondo ukwenza olu luhlu lube yinjongo kwakhona.
Endaweni yoko,jolisa kumfundi.
Yenza incwadi yakho ifumaneke ezivenkileni okanye kwiiwebhusayithi abafundi bakho abathenga kuzo iincwadi, ngeefomathi abathenga kuzo. Yenza kube lula ukuthenga nokufundeka ngokulula.
Sukwenza uluhlu lube ngumthengi wakho. Gcina umfundi umthengi wakho-abantu obabhalela iincwadi ngokwenene.
UTim Grahl, umseki we Phuma: cinga , apho inceda ababhali ukunxibelelana nabafundi kwaye bathengise iincwadi ezininzi. UTim ukwangumbhali we Iikopi zakho zokuqala ezili-1000: Isikhokelo samanyathelo ngamanyathelo sokuThengisa iNcwadi yakho .
'I-Mixed-ish' Inokuba 'yi-Black-ish' ngeyona ndlela iQhelekileyo, ukuba ayiNgqineli ezi Ncoko
'I-Star Trek: UkuFumanisa' iNgakumbi eyiPost-Trump
Kuyinyani kwaye kubuhlungu, 'Umdlalo woLinganiso' kukuKhangela okuSondeleyo kuBomi buka-Alan Turing
INkosana uWilliam kunye noKate bathatha ikhefu kwimisebenzi yokufunda ekhaya iVeki ezayo
Inombolo yefowuni yasimahla yokukhangela ngegama ngaphandle kwentlawulo
uchanekile kangakanani umvuzo weglasi
iphepha elimhlophe elibuyisela umva igama lokujonga
wasweleka u jackie ku nurse jackie
lide kangakanani hamilton disney plus
Iimfazwe zeenkwenkwezi zeemfazwe kuphuhliso
bangaphi ababukele umdlalo weetrone